October 16, 2021 - HealthTimes
THE COVID-19 Chief Coordinator in the President’s Office, Dr Agness Mahomva has urged Zimbabweans who received their first jabs of COVAXIN vaccine but failed to get their second doses to start afresh with a different one. By Patricia Mashiri She made this plea following indications that thousands of people who received their first doses of the COVAXIN vaccine in May and June when Zimbabwe received its shipment of 35,000 doses from India are yet to get their second jabs five months down the line. Speaking during a Science Cafe, Dr…
#COVID19, BREAKING NEWS, Health NewsCOVAXIN, COVID-19, Dr Agnes MahomvaLeave a comment
COLD chain and logistical issues could hinder Zimbabwe’s plans to deploy and administer the Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 vaccine in the short distant future, a top health official has said. By Michael Gwarisa The development comes at the back of indications that the Southern African country also encountered capacity challenges during their rollout of the Russian manufactured Sputnik-V vaccine which is a viral vector vaccine just like the Johnson & Johnson jab. Speaking during a Media Café that was organized by the Health Communicators Forum of Zimbabwe (HCFZ) in…